Maraykanka oo dhinacyada Itoobiya ugu baaqay in ay dhaqan-geliyaan xabbad-joojinta | Dhaymoole News
Washington (Dhaymoole) Maraykanka ayaa doonayaa in dhinacyada iska soo horjeeda ee ku lug leh colaadda Itoobiya ay dhaqan geliyaan wada hadalka xabbad-joojinta iyo in adeegyadii muhiimka ahaa dib loogu soo celiyo gobolka Tigray, sida uu Jimcihii sheegay xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken.
“Waxaan hadda ku boorineynaa dhinacyada inay ka faa’iideystaan fursadda lagu hormariyo wadahadallada xabbad-joojinta oo ay ku jiraan amniga iyo soo celinta adeegyada muhiimka ah ee gobolka Tigray si deg deg ah,”Ayuu Blinken ku yidhi hadal uu soo saaray.
Afhayeenka dowlada Legesse Tulu ayaa warbaahinta dowlada u sheegay in wararka sheegaya in ciidamada Tigreega ay ka baxeen Canfarta ay tahay waxay uu ugu yeedhay ‘been weyn.”
Getachew Reda, oo ah afhayeenka TPLF, ayaan ka jawaabin codsiyo ku saabsan inuu faallo ka bixiyo.
Isniintii, ayuu u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in ciidamada Tigraygu ay ka baxayaan gobolka Cafarta.